Rsi Ichimoku Indicator - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Rsi Ichimoku Indicator
မေ 12, 2018
အဆိုပါ Ichimoku ညွှန်ပြချက်နောက်ကွယ်မှအတွေးအခေါ်များကိုအသုံးပြုပေမယ့်သီးခြား window တွင် RSI တန်ဖိုးများနှင့်မြေကွက်ကသက်ဆိုင်. အရှိန်အဟုန်နှင့်လမ်းကြောင်းသစ်ပြောင်းလဲမှုများတိကျမှုအမှတ်အသား.
ဒါဟာစံ MT4 Ichimoku Kinko Hyo ညွှန်ပြချက်အပေါ်အခြေခံသည်ငါမူကားတစ်ဦးခွဲ window တွင်အစား RSI တန်ဖိုးများကိုခြေရာခံဖို့ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ.
သင်သည်အခြားမဟာဗျူဟာ၏အတည်ပြုချက်ကိုအဖြစ်အသုံးပွုနိုငျ, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံ ICHI ဆိုတာအသုံးပြုသူလျှင်သင်သည်သင်၏ ICHI ဆိုတာဇယားတစ်ခုစိတ်ကူးတွဲဖက်အဖြစ်အသုံးပွုနိုငျ.
ကျွန်မသတိထားမိခဲ့ကြရာတခုကတော့, ငါယူမယ့်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားတွင်ပြသကြ, အစိမ်းရောင် Chinkou Span လိုင်းထိပ်ဎခွတစ်ခုသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဒင်္စုစည်းပြီးပြသနိုင်ဖို့ပေးသည်သောအလွန်ကြီးစွာသော signal ကိုဖြစ်ပါတယ်.
အားလုံးသုံးလိုင်းများမှာတစ်ကြိမ်သာဖြစ်စေဦးတည်ချက်အတွက်ငါပြကုန်သွယ်မှုကိုယူတဲ့အခါမှာတစ်ဦးလျှင်အဖြစ်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးမှတဆင့်ကိုချိုးဖျက်သည့်အခါမကြာခဏကောင်းတစ်ဦးပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ထွန်းကြောင်းနောက်ထပ်အချက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျ pa ရွှေ့ဖို့အခန်းငယ်တခုကိုရှိကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်ဆိုပါကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ် (13 နိမ့်ဆုံး PIP) ခုခံဖို့. စကားမစပ်ငါအတည်ပြုခဲ့သည်၏ငြင်းပယ်အပေါ်ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ထား 70 သတင်းအဖြစ် rsi လိုင်းအချိန်လေးဝေးခဲ့တာနဲ့ကျွန်မanice နည်းနည်း Pre-သတင်းအကွာအဝေးဦးရေပြားနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်.
သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ချပြီးတဲ့အခါမှာ, ရုံမိုဃ်းတိမ်ကိုစီး float ရန်သင့်ဇယား၏အရောင်ကနောက်ဆုံးအရောင်ကိုပြောင်းလဲ.
မှတ်စု: ဗားရှင်း2အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ဇယား၏အရောင်နှင့်လိုက်ဖက်သောအော်တိုရိပ်စနစ်ဖြင့်မွမ်းမံ.
အလိုအလျောက်ဗားရှင်းခွင့်ပြုခံရဖို့ DLL ရဲ့လိုအပ်ချက်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ဇယား၏ရန်နောက်ဆုံးအရောင်ကိုက်ညီ၏ဒုက္ခကိုကယ်တင်
ဒါမိုဃ်းတိမ် float မှပေါ်လာသော. ပြီးတာနဲ့အလိုအလျောက်အရောင်လိုအပ်ချက်များကို loaded 1 သင့်ရဲ့ဇယားအရောင်ကိုရှာဖွေ tick.
အော်တိုအရောင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ Indie ရဲ့နောက်ထပ်ဥပမာအဘို့အသငျသညျအကြှနျုပျ၏က်ဘ်ဆိုက်ကူး pop နိုင်ပါတယ်.
Rsi Ichimoku Indicator တစ်ခု Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Rsi Ichimoku Indicator သည်သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Rsi Ichimoku Indicator.mq4 install လုပ်နည်း?
Rsi Ichimoku Indicator.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှမိတ္တူ Rsi Ichimoku Indicator.mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Rsi Ichimoku Indicator.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator Rsi Ichimoku Indicator.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ Rsi Ichimoku Indicator.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးLagrange's Interpolation Polynomial
Next ကိုဆောင်းပါးHodrick Prescott Indicator